Fahadisoana isan-karazany rehefa ampifanarahana OST Mametraha amin'ny boaty mailaka Exchange Server.
Home Products DataNumen Exchange Recovery Fahadisoana fampifangaroana
Fahadisoana isan-karazany rehefa ampifanarahana OST Mametraha amin'ny boaty mailaka Exchange Server
Azonao atao ny manokatra lahatahiry ao amin'ny fampirimana ivelan'ny seranana (.ost) fisie, saingy tsy afaka mampifangaro azy ireo amin'ny mpizara Exchange, na mifanena amina hafatra lesoka fanamafisana isan-karazany aseho ao amin'ny lozam-pifandraisana ao amin'ny fampirimana ireo entana voafafa.
Ity hadisoana ity dia midika hoe anao OST simba ny fisie, na hafatra mailaka iray na maromaro ao amin'ny OST simba ny rakitra ary tsy afaka manitsy azy ireo ny fizotran'ny fampifanarahana.
Raha hafatra mailaka diso iray na maromaro no mahatonga ny lesoka, indraindray dia azonao atao ny mamafa fotsiny ireo hafatra ireo hamahana ilay lesoka. Microsoft koa dia manome ny OST Fitaovana fanamarinana ny fahamendrehana izay afaka manamboatra hadisoana kely fanaingoana kely ihany koa. Na izany aza, ho an'ny most tranga, ny vahaolana tsara indrindra hisorohana ny fahaverezan'ny data sy ny hadisoana hafa dia ny fampiasana DataNumen Exchange Recovery, toy izao manaraka izao:
Find the OST rakitra izay mahatonga ny lesoka. Azonao atao ny mamaritra ny toerana misy ny rakitra miorina amin'ny fananana aseho ao amin'ny Outlook. Na ampiasao ny Mitady miasa ao amin'ny Windows hikarohana ny OST hametraka.
Ampidino am-boalohany ny tany am-boalohany OST hametraka. Mba hisorohana ny fiarovana dia aleo averinao alefa izy.
Amboary ny lesoka. Hamarino tsara fa marina ny fikirana ho an'ny kaonty mailaka Exchange ao amin'ny Outlook, ary afaka mifandray amin'ny server Server Exchange ianao. Avy eo restart Outlook ary andefaso / raiso ny mailakao amin'ny boaty mailaka Exchange mifandraika amin'izany, izay hamela an'i Outlook hamorona fisie fampirimana offline vaovao ho azy ary hampifanaraka ny tahiriny amin'ny boaty mailakan'ny Exchange. Raha tsy mandeha io fomba io dia diso ny mombamomba anao ankehitriny. ary tsy maintsy mamafao azy ianao ary mamorona vaovao, toy izao manaraka izao: